I-Matheus Pereira Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
I-Alex Telles Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
Ikhaya AMAZIKO E-EUROPEAN FOOTBALL Abadlali bebhola basePortugal I-Goncalo Guedes Ibali leNkulumbuso yezaBantwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold
Ibali lethu le-Goncalo Guedes Biography ikubonelela ngendaba epheleleyo yeBali lakhe loBuntwana, uBomi baKwangaphambili, abaDala, uSapho, uBomi boNtando (intombi / uMfazi), indlela yokuphila kunye noBomi boBuntu. Uhlalutyo olupheleleyo lweBali lakhe loBomi, kanye ngeentsuku zakhe zokuqala, ukuya kuthi xa esaziwa.
Ibali lobomi likaGoncalo Guedes. 📷: I-Instagram.
Ewe, wonke umntu uyazi malunga nokuguquguquka kweWinger ngohlobo olubanzi lokuseta. Nangona kunjalo, iqhezu lebhola ekhatywayo lebhola aficionados ofunde iGoncalo Guedes ' I-Biography enika iinkcukacha zeziganeko ezincinci ezaziwayo ebomini bakhe. Ngoku, ngaphandle kokuqhubela phambili, masqale.
I-Goncalo Guedes Ibali loMntwana:
Ukuqala, UGonçalo Manuel Ganchinho Guedes Wazalwa ngomhla wamashumi amabini anesithandathu ku-Novemba ka-29 kumasipala wase Benavente ePortugal. Ungomnye wabantwana aba-1996 ozelwe ngumama wakhe omncinci owaziwayo kunye notata wakhe ogama linguRogério Guedes.
Enye yeefoto zabantwana zokuqala ezaziwayo zeGoncalo Guedes. 📷: I-Instagram.
U-Goncalo omncinci wakhulela kwindawo yakhe yokuzalwa e-Benavente ePortugal kunye nomntakwabo omdala kuphela kunye noJoao Maria - ekuthiwa wayeneminyaka emibini ubudala kuye.
Ukukhula eBenavente, uGoncalo wayengafundanga ukuhamba xa wayeqala ukudlala ngebhola. Wayengenamdla kwizinto zokudlala kwaye wayekuthanda ukuphatha iibhola ezimbini xa ekugqibeleni wafunda ukuhamba.
Imvelaphi yoSapho lukaGoncalo Guedes:
Ngeli xesha, abaninzi baya kuqala ukuzibuza ukuba kwenzeka njani ukuba uGoncalo athandane nebhola, ngakumbi xa idolophu akhulela kuyo yaziwa kakhulu ngokuhlaselwa kweenkomo kunebhola lebhola. Kuyingenelo ukuqaphela ukuba uJoao (umntakwabo Goncalo) waqala ukudlala ibhola esemncinci.
Ke, kwakuyindalo kuphela ukuba inkanuko kaJoao yebhola ekhatywayo iguqe kumntakwabo omncinci. Ngaphezu koko, abazali bakaGoncalo Guedes yayingabathakazeli bezemidlalo ababengenangxaki ngokuvumela abantwana babo ukuba badlale ibhola ezitratweni nakwindawo ebiyimbelwe emva kwendlu yabo.
Ifoto yobuntwana enqabileyo kaGoncalo Guedes omncinci nomnye wabazali bakhe. 📷: I-Instagram.
Uqala njani uKhathalelo lwebhola kwiGoncalo Guedes:
Ngexesha uGoncalo wayeneminyaka emi-5 ubudala, waqala ukuhamba noJoao kwisikolo sebhola eRibatejo apho umntakwabo osele ekhulile wayeqeqeshelwe ukugcina ibhola. Ngelixa abantakwabo babekuyo, uGoncalo wayenokubukela nje kuphela kuba kwakungekho qela leqela labantwana abancinci bexesha lakhe.
Nangona kunjalo, xa bekukho ukhuphiswano olwalungadingi zifundo zamazisi, umqeqeshi weqela wanika abantwana abancinci abanomdla wokuzibonakalisa, lithuba elifanelekileyo lokuba uGoncalo enze ngcono. Ngapha koko, wayenobuchule bebhola obugqwesileyo kangangokuba abantu ababemazi utata wakhe benza iminxeba yokucinezela esithi umntwana ngeloxesha kufanelekile ukuba akhe umsebenzi kwezemidlalo eBenfica.
Wayeneminyaka emi-5 kuphela ubudala kodwa wayenako ukukhuphisana nabantwana ababemdala ngeminyaka emi-2 kuye. 📷: Pinterest.
Iminyaka kaGoncalo Guedes 'yaBasebancinci kwiBhola eKhatywayo:
Ukuthobela izwi labaninzi, utata kaGoncalo wenza konke okusemandleni akhe ukuqinisekisa ukuba iprodigy yebhola iqalile ukuziqeqesha kunye neBenfica eneminyaka eyi-6. Nangona kunjalo, akuzange kube yiminyaka emi-3 kamva apho umntwana oneminyaka eli-9 ubudala waba yinxalenye ngokusemthethweni yenkqubo yolutsha yaseBenfica.
Ifoto yomnyazi webhola ekhatywayo kwiminyaka emi-4 emva kokuba elilungu elisemthethweni lenkqubo yolutsha yaseBenfica. 📷: I-Instagram.
Ukuqhubela phambili komncinci kwinqanaba leeklabhu ngaphandle kokubetha. Wenza ubuchule bakhe bokuqala ngeBenfica's B ngo-Epreli ka-2014 kwaye waqala ukwenza imbonakalo yeqela lokuqala leqela emva kweyeDwarha kulo nyaka.
I-Biology ye-Goncalo Guedes '-Idaba eliya kuLwazi ngeNdawo:
Kwinqanaba eliphezulu lomsebenzi kaGoncalo kunye neBenfica, wafumana amanqaku ngokuchasene neAtletico Madrid ngoSeptemba ngo-2015 ukuba abe ngoyena mncinci wamaPhuthukezi kumanqanaba eqela leChampions League ukusukela Cristiano Ronaldo.
Bona ukuba ngubani owayeneminyaka eli-19 ubudala xa wayeqala ukuzoba uthelekiso noRonaldo. 📷: I-Instagram.
Ukuthembisa okunje phakathi kweminye imidlalo ebonakalisa umdla kuye kwamenza ukuba aphumelele kwi-radar yePSG awayibolekisa ngayo ngo-2017. Nangona kunjalo, walifumana ixesha elaneleyo lokudlala ngoba ubukho babanye abadlali UJulian Draxler kwaye Angel Di Maria waqinisekisa ukuba uhlala kwiibhentshi.
I-Biology ye-Goncalo Guedes-Ukunyuka kwiNdaba yoDumo:
Ngethamsanqa, i-PSG yanika uGoncalo eValencia ngemboleko-mali ngo-2017. Wayesetyenziswa kakhulu kwicala laseFransi kwaye wababuyisela ukuthembela kwabo kuye ngeenjongo zokufumana amanqaku kunye nokufumana iingxelo ezivela kumaphepha-ndaba emidlalo aphesheya kwehlobo lakhe. Ke, akumangalisi ukuba icala laseSpain lenze isivumelwano sakhe esisigxina kwi-2018.
Ukuqhubela phambili kwixesha lokuyila le bio, uGoncalo uqinise indawo yakhe eValencia ngokukhokela iklabhu ezininzi kwiimpumelelo ezininzi kubandakanya ukoyisa I-Barcelona ukuphumelela i-C2019D yonyaka wokugqibela ka-Copa del Rey. Akaziwa ukuba ulikhoboka elibi kwisebe lamanye amazwe njengoko enzile ukuze ancede ilizwe lakhe - IPortugal iphumelele i-Finals League yokuqala ye-UEFA Nations League ngo-2019.
Ophumeleleyo wenze kakuhle ukubonisa ubungqina bakhe ukusuka eBenfica ukuya eValencia nakumanqanaba aphesheya. : Injongo.
Bonke abanye, njengoko besithi, yimbali.
Ngubani intombi kaGoncalo Guedes?
Ukuqhubela phambili ubomi bothando lwe-winger, akekho kubudlelwane bomtshato ukususela nge-2020 kaJuni, nangona kunjalo, unentombi entle egama linguMadalena de Moura Neves.
I-duo yathandana ukusuka ngexesha uGoncalo wayengengomntu eBenfica kude kube xa wayesaziwa. Ngaphezu koko, intombi kaGoncalo Guedes yithweswe izidanga kwezolawulo kwaye yenza umsebenzi olungileyo ekugcineni uninzi lobudlelwane babo obunomona buze kude emehlweni.
Dibana nentombi kaGoncalo Guedes uMadalena de Moura Neves. 📷: AS.
Ubomi boSapho beGoncalo Guedes:
Ngaba uyazi ukuba intombi kaGoncalo Guedes ayisiye kuphela umntu osondele entliziyweni yakhe? Sikuzisa iinyani malunga namalungu osapho lwawinger eqala nabazali bakhe.
Malunga Nabazali bakaGoncalo Guedes:
URogério Guedes nguyise wobuchule bebhola. Akukho nto ingako ingenalo ulwazi malunga nohlobo lukaJobe awayenalo ngexesha lokuphila kukaGoncalo. Nangona kunjalo, siyazi ukuba uthatha isabelo sakhe esifanelekileyo sempumelelo kwimpumelelo yebhola ekhatywayo. KwakunguRogério owayeqhuba uGoncalo omncinci kuqeqesho. Unoyolo ukuba waphila ubomi bokuzinikezela kumaphupha akhe obutsha. Ukongeza, uhlala enekratshi ngento yokuba ngunyana wakhe omncinci.
Ngokucacileyo omncinci owaziwa ngabazali bakaGoncalo Guedes ngumama wakhe onothando. Ewe, i-Winger ayifane ithethe malunga naye kodwa iyahamba ngaphandle kokuchaza ukuba indima yakhe ekuphuhlisweni kwakhe ayinakulinganiswa.
Dibana nabazali bakaGoncalo Guedes. 📷: I-Instagram.
Malunga Nabazukulwana bakaGoncalo Guedes:
njengoko senze kakuhle ukukhankanya ngaphambili, abazali bakaGoncalo Guedes banabantwana nje babini oyifestile noJoao (umntakwabo omncinci). UJoao wayenomdla kwangoko kwibhola yebhola njengegoli. Nangona kunjalo, akazange abe yibhola ekhatywayo njengoGoncalo amthandayo kwaye axhase ngaphandle kokuzithemba.
UGoncalo Guedes kunye nomntakwabo uJoao. 📷: I-Facebook.
Malunga nezihlobo zikaGoncalo Guedes:
Kude nosapho lomyeni olusondeleyo, akukho zirekhodi zeengcambu zosapho kunye nookhokho bakhe. Kananjalo, utat'omkhulu, oomalume noomalume abaziwa kakhulu. Kwangokunjalo, i-winger isesokuveza iinyani malunga nabazala bakhe, umtshana wakhe kunye nomtshana wakhe.
Ubomi bobuqu bukaGoncalo Guedes:
Ngubani uGoncalo ngaphaya kwebhola kwaye luhlobo luni lomlingiswa wakhe kwimidlalo edlalwayo? Zeziphi iinyani abahlobo kunye nosapho abanazo ukuze babonakale ebantwini bakhe? Ukuqala, iimpawu zakhe ziyafana nezo zabantu abanophawu lweZodiac yiSagittarius.
I-winger iyamangalisa ngendlela ephantsi emhlabeni, ekrelekrele ngokweemvakalelo, ezolile kwaye eyoyikisayo. Uyakuthanda ukuhamba, ukuqubha, ukuchitha ixesha kunye nosapho kunye nabahlobo, phakathi kwezinye izinto anomdla kuzo kunye nokuzonwabisa.
Ngaba ungambona echitha ixesha kunye nosapho kunye nabahlobo bakhe? 📷: FB.
U-Goncalo Guedes 'Ubomi boBomi- Ukubaluleka kweNet kunye nendlela azisebenzisa ngayo iiMali zakhe
Ngokubhekisele kwindlela umdlali webhola ekhatywayo ayenzayo kwaye ayichithe ngayo imali yakhe, unesibalo esiqikelelweyo se-5 yezigidi zeerandi ngexesha lokuyila le bio. Ubuninzi bobutyebi be-winger bunemvelaphi kwimivuzo kunye nemivuzo ayifumana ngokuba yimpumelelo yehlabathi.
Uxabisa i-5 yezigidi ukusukela nge-2020 kaJuni. 📷: IfotoFunia.
Ukongeza, umdlali webhola ekhatywayo uyakonwabela ukujinga kwengeniso evela kwizinto zokugqibela. Nangona kunjalo, akaphili ubomi obudanyazayo babadlali abahamba bebhola. Ngapha koko, uninzi olusondele kwi-winger lungangqina ukuba uyayixabisa indlela yokuzigcina ephila ngaphezulu kokunethezeka okungeyomfuneko.
Izibakala zeGoncalo Guedes:
Ukusonga ibali lethu lobuntwaneni likaGoncalo Guedes kunye nebhayiloji, sikubona kufanelekile ukuveza iinyani ezingaziwayo okanye i-Untold malunga ne-winger.
Inyani # 1- Ukwahlulwa kwemivuzo ngokunxulumene noMmi wasePortugal ongummi:
UMBULELO / UKUKHUSELEKA
Umvuzo kwi-Euro (€)
Umvuzo kwiDollars ($)
Umvuzo kwiPound (£)
Ngonyaka € 5,832,960 $6,623,617 £ 5,208,000
Ngenyanga € 486,080 $551,968 £ 434,000
Kwiveki nganye € 112,000 $127,182 £ 100,000
Ngosuku € 16,000 $18,169 £ 14,286
NgeYure nganye € 667 $757 £ 595
Ngomzuzu € 11 $12.7 £ 9.9
NgeSekondi nganye € 0.18 $0.2 £ 0.16
Le yinto kaGoncalo Guedes uzuze ukusukela oko waqala ukujonga eli phepha.
Ubusazi?… Umndilili ophakathi ofumana umvuzo ophakathi ngenyanga oyi-2,750 ngenyanga kuya kufuneka asebenze ubuncinci iminyaka elishumi nane kwaye iinyanga ezimbini ukufumana i- € 486,080. Lo ngumvuzo kaGoncalo Guedes (ngenyanga) eValencia.
Inyani # 2- Imilinganiselo yeFIFA:
Umdlali obanzi unomlinganiso opheleleyo weFIFA yamanqaku angama-82. Umlinganiso ongekho mgangathweni unento yokwenza nokusebenza kwakhe ngokungakholisiyo ngexesha lesizini lika-2019/2020. Iya kuba ngumbandela wexesha ngaphambi kokuba anyathele umdlalo wakhe ukuze afezekise umlinganiso wakhe opheleleyo okanye amanqaku angama-88.
Amanqaku angama-82 aqinisekile ukuba akamjongi umdlali wekhalifa yakhe. Ngaba iyenzeka? 📷: ISOFIFA.
Inyani # 3- I-Trivia:
Kukho okungakumbi ukuya ku-1996 kunokuba ngunyaka wokuzalwa kukaGoncalo. Kwakunyaka omnye ikopi yokuqala yolwimi lwenkqubo yeJava yakhutshwa. I-1996 yayikwangunyaka apho iimovie ezifana noMhla wokuzimela kunye neMishini yokuNokwenzeka zingenayo imiboniso bhanyabhanya.
Inyani # 4- Uthando lwezilwanyana zasekhaya:
I-winger inento yeekati ingakumbi ezo zohlobo olunqabileyo. Unokubonwa ecinezela ikati kumfanekiso ongezantsi. Ikati ngokucacileyo ijonga ukuba iseluxolweni kunye ne-winger kwaye akukho mathandabuzo ayithandayo.
Kwingcamango yesibini, ngaba olu luhlobo olunqabileyo lomntwana ophethe iLeopard okanye ikati nje? 📷: IG
Ukwenza ubomi bube lula, silungiselele le tafile ebonelela ngolwazi oluchanekileyo kwi-Goncalo Guedes Biography Facts. Apha, unokufumana iinyani ezikhawulezayo malunga nomgcini webhola wasePortugal.
Igama eliphelele UGonçalo Manuel Ganchinho Guedes
Umhla wokuzalwa Ngomhla wamashumi amathathu anesithandathu ku-Novemba ka-29
Indawo yokuzalelwa UMasipala waseBenavente ePortugal
Ukudlala Indawo Umdlali
Utata URogério Guedes
Umama N / A
Sibini NguJoao Maria
Girlfriend UMadalena de Moura Neves.
Ubungakanani benethi Isigidi ezi-5 (ama-2020 amaNqaku).
ukuzenza Ukuhamba, ukuqubha kunye nokuchitha ixesha elifanelekileyo nosapho kunye nabahlobo.
Enkosi ngokuthatha ixesha lokufunda okubhaliweyo okuqiqayo kwi-biology kaGoncalo Guedes. Ku- I-Lifebogger, sinamehlo ethu ekuhambiseni amabali obuntwaneni kunye nenyaniso ye-biography ngokuchanekileyo nangokuthe tye. Nceda ungathandabuzi ukunxibelelana nathi okanye ubeke uluvo lwakho kwibhokisi engezantsi ukuba ufumana nantoni na engakhange ilunge kweli nqaku.
Isici seNqaku loMfanekiso: "IsiRashiya: Hat-trick Ronaldo izisa iPortugal umzobo kwi-Iberia derbyNgu-Anna Nessie onelayisensi phantsi CC BY-SA 3.0. Ifayile ikhutshiwe kwenye ifayile: Gonçalo Guedes.jpg.
Idayari yeBhola yeBhola yeBenfica
Idayari yeBhola ekhatywayo yeValencia
I-Florentino Luis Ibali lokuKhula kobuntwana kunye ne-Untold Biography Facts
I-Rafa Silva Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biografics yeNobold
I-Joao Cancelo yobuntwana Ibali leNqaku leNgcaciso yeBantwana yeNqaku leNqaku
I-Haris Seferovic Ibali loBuntwana kunye neNqaku le-Biology ye-Harold
Luka Jovic Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
I-Joao Felix Childhood Indaba I-Untold Biography Facts
izimvo ezintsha zokulandela Izimpendulo ezintsha kwiimbono zam
Jonga zonke izimvo
Umhla oLungisiweyo: nge-25 kaSeptemba ngo-2020
Ndingazithanda iingcinga zakho, nceda uphawule.x
I-Juan Mata Ibantwana Ibali Plus Untold Biography Facts
Umhla oLungisiweyo: nge-22 kaSeptemba ngo-2020
U-Eric Dier Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Umhla oLungisiweyo: nge-17 kaSeptemba ngo-2020